Maxay ka dhigan tahay Damnum? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Start daymaha -Leaks damnum
1 Waa maxay damnum?
2 Sidee lumay damnum?
2.1 Tusaale: Xisaabinta Damnum
3 Agio iyo Disagio
3.1 Tusaale ahaan: Agio iyo Disagio ficil ahaan
4 Cawaaqibta amaahda
Waa maxay damnum?
Ein damnum waa farqiga u dhexeeya qadarka magac ahaan loogu amaahdo ee lagu amaahdo iyo xaddiga lacagtiisa la siiyay. Damnum waa qayb ka mid ah heshiis cad oo u dhexeeya kuwa amaahda iyo deeq bixiyayaasha. Tusaale ahaan, khidmadda lacag bixinta. Xayeysi ayaa sidoo kale lagu dabooli karaa damnum. Waxaa jira laba nooc oo ah Damnum, Agio iyo Disagio.
Sidee lumay damnum?
Damnum waa qeyb ka mid ah qandaraaska ka dhexeeya deyn-bixiyaha iyo deyn-bixiyaha oo lagu qeexay qoraal ahaan. Heshiiskaas oo kale, waa lagama maarmaan in la go'aamiyo haddii ago ama qiimo dhimis lagu xisaabiyo. Hay'adaha amaahda waxay badanaa leeyihiin qaab ay iyagu door bidaan oo ay u soo bandhigaan amaahda.
Dumarka waxaa badanaa loo muujiyaa boqolkiiba. Waxay loola jeedaa qiimaha qiimaha.
Tusaale: Xisaabinta Damnum
Haddii aad ka soo amaahatid hay'ad deyn ah 10.000 Euro, bangigu wuxuu kuu qabanqaabin karaa damiin si aad u daboosho khidmadda shaqo. Tusaale ahaan u qaadan in Damnum yahay 8%.
Sidaa darteed, damiin ah 800 ayaa lagu soo rogi lahaa. Marka qaddarkan la soo oogay, waxay kuxirantahay haddii uu yahay ago ama diidmo.
Agio iyo Disagio
Agio iyo Disagio waa labada nooc ee Damnum. Haddii aad ogolaato Agio inuu yahay deyn bixiye, waxaa ugu horreyntii laguu soo diri doonaa qiimaha rasmiga ah ee la isku raacay bixiyahaaga. Markaad dib u bixiso deynkaaga, si kastaba ha ahaatee, waxaad bixineysaa waxoogaa ka badan ilaa aad ka bixisay qiimaha qiimaha rasmiga ah, laakiin sidoo kale damnum. Sidaa darteed lacagta caymiska ayaa sidoo kale loo yaqaan 'premium'.
Sida caadiga ah, amaahiyaha ma bixinayo qaddarka amaahda ah ee lagu soo celiyay hal shey, laakiin tartiib tartiib ah, tusaale ahaan qayb ahaan. Dhibaato halis ah, caadi ahaan, sicir kasta wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah qiimaha qiimaha iyo qeyb ka mid ah damnum.
Haddii aad ogolaato diidmo sida deynta, ma helaysid qadarka dhan markaad bixiso deynta. Taa bedelkeeda, xaddiga dhabta ah ee la bixiyay waxaa hoos udhacay damnum. Sababtaa awgeed sicir-dhimista waxaa sidoo kale loo yaqaana sicir-dhimis.
Tusaale ahaan: Agio iyo Disagio ficil ahaan
Ka fikir inaad ku amaahato 10.000 Euro oo ka timi hay'ad dayn ah, lacagtaasina waa mar kale 8%. Waxaad ogolaatay inaad dib u bixiso amaahda 10 qeybaha 1.000 Euro.
At heerka kasta oo sidoo kale ka mid ah toban meelood loo lacagta lagu dari doonaa: waxaad bixin kiiskan ma 1.000 euros, laakiin euros 1.080 per heerka haddii lacagta waa la tixgeliyaa.
Haddii ay dhacdo diidmo, waxaad ku raacsan tahay qiimaha qiimaha ah ee 10.000 Euro oo leh deymankaaga, laakiin waxaad heli doontaa keliya 9.200 Euro. Farqiga ayaa u dhigma sicir-dhimista. Tusaale ahaan, weli waxaa lagugu leeyahay EURO 10.000 oo dhan oo leh deymankaaga. Haddii aad ku heshiisay bixinta isku mid ah sida tusaalihii hore, waxaad bixin doontaa lacagta Euro 1.000
Sababo la Damnums waxaa inta badan u dhacdaa in amaahdaana ah waa in ay aqbalaan amaah sare. Haddii aad rabto in aad qaadato deyn ah oo EUR 10.000 tusaale ahaan, in si sax ah maal euros 10.000 in mashruuca dhismaha ah, ka dibna laga yaabaa in aadan haysan lacag kugu filan ka dib markii laga jarin dhimis la heli karo. Sidaa darteed, waa in aad ka mid ah credit a dhiganta sare, kuwaas oo horey u tiriyaa farqiga this.
Hase yeeshee, sicir-dhimis sababtoo ah, qiimaha hoose ee dulsaarka ayaa inta badan la isku raacsan yahay. Heerarka dulsaarka saamiga ayaa muujinaya inta dakhliga dulsaarka la kordhay, iyada oo la tixgelinayo dulsaarka magacaaban iyo Disagio.
Maqaalka horebacda xafaayadda
Maqaalka xigtaDeynta ugu dambeysa